TTSweet: အိမ်မ၀ယ်ခင် စဉ်းစားကြဘို့ ....
Posted by T T Sweet at 8:24 PM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း September 27, 2010 at 4:59 AM
TURN-ON-IDEAS September 27, 2010 at 1:26 PM
အမျိုးသမီးရဲ့ PR application was not successful...
(ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သာတော့မှသာ နိုင်ငံသားပြောင်းချင်ပါတယ်)
Pho La Nat Thar September 28, 2010 at 2:21 PM
ခု PR တွေက၂၀%လက်ငင်းပေးရမယ်ဆိုတာရယ်။အိမ်ရှင်တွေကCOVအရမ်းတောင်းကြတော့ကြာလေမလွယ်လေဖြစ်လာတယ်။ အိမ်ငှားခတွေကလည်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်မြင့်လာတော့အရင်ကနဲ့ စာရင်ပိုပြီးကြပ်တည်းလာတယ်ဗျ။
Now COV is getting down. Because of new rules,it is not allowing to own two property at the same time.Minimum MOP is5yrs now. So, the market will be stable.
လသာည September 29, 2010 at 12:53 AM
ဒီပိုစ်အတွက် ဦးခြိမ့်ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ညီမတို့လည်း ဒီကို မလာခင် မြန်မာပြည်မှာ အိမ်ဝိုင်းဝယ်ဖို့ စဉ်းစားတုန်းက တော်တော် တွေးကြရသေးတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အခုလောလောဆယ် မနေသေးပဲနဲ့ ၀ယ်သင့်မ၀ယ်သင့်၊ နောက်ပြီး ဒီတိုင်းမထားပဲ အိမ်ဆောက်သင့် မဆောက်သင့်ပေါ့နော်။ နောက်တော့လည်း လူကြီးတွေနဲ့ ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုင်ပင်ပြီး သင့်တင့်တဲ့ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းဝယ်၊ အိမ်ကိုလည်း တဖြည်းဖြည်းချင်း စိတ်တိုင်းကျ ဆောက်လိုက်တယ်။ (နည်းနည်းချင်းပေါ့နော်။) ပိုက်ဆံနည်းတော့ ၆ လလောက်ကြတယ်။ ဒီကြားထဲ သစ်ဈေး၊ သံဈေး၊ အုတ်ဈေးဆိုတာ ၆ လအတွင်း ၂ ဆနီးနီး တက်သွားတာ.။ အိမ်ပြီးမှ ပြီးပါ့မလား စိတ်ပူလိုက်ရတာ။ အခုတော့ အလှအပ တအားမမွမ်းမံနိုင်ပေမယ့် သူများဌားလို့တော့ ရသွားတယ်။ ၀ိုင်းဈေးတွေလည်း တက်သွားတော့ ၀ယ်ထားရကျိုးနပ်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်။ မြေကတော့ စိတ်မညစ်တတ်ရင် ၀ယ်ထားတာ မရှုံးဘူးလို့ ညီမလည်း ထင်တာပဲ..။
Moe Cho Thinn September 29, 2010 at 7:53 AM
ဗဟုသုတ ရပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ မနေတောင် အတော်များများ အချက်တွေက တူညီကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်.. (ဂျကား မပီတာ နောက်သလိုများ ဖြစ်သွားမလားးး) ခင်လို့ ချ (အဲ..) စ တာပါနော်။
T T Sweet September 30, 2010 at 2:54 AM
ဟွန့် ... မရှိုသင်းနော် ... ဂျကားမပီတာကို လာနောက်နေတယ်။ တော်သေးတယ် ရေးတာမ၀ဲလို့။ ရေးတာပါဝဲရင်တော့ အိမ်ဝယ်တဲ့ ပို့စ်ကနေ ဟာသပို့စ်ဖြစ်တော့မှာပဲ ...
လသာည ... ညီမလေး ... ကိုယ့်အနေနဲ့ စဉ်းစားရင်တော့ ငွေကို ဒီတိုင်းထားမဲ့ အစား တိုက်ခန်း (သို့) အိမ်ဝယ်ပြီး ငှါးထားတာ ပိုသဘောကျတယ်။ ၀ယ်လိုက်တာ မှန်ပါတယ်။